Nei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa? ▷ ➡️
Nei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa?. Bhaibheri rinotiudza nyaya yemaguta maviri akaparadzwa naMwari nemoto nesarufa. Sodoma neGomorra. Iyi nhoroondo yaGenesi inoratidza maguta maviri uko zvivi nezvakaipa zvakatora vagari vayo. Naizvozvo Mwari aifanira kuvaparadza semuenzaniso wezvinoitika kana zvivi zvanyanya.
Zvisinei, zvakakosha kunzwisisa chaizvo zvakaitika.
1 Nei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa?: Iyo nyaya
1.1 Abrahama naRoti
1.2 Kukundwa kweSodhoma neGomora
1.3 Chikumbiro chaAbrahama
1.4 Kurangwa kweSodhoma neGomora
2 Ndezvipi zvivi zveSodhoma neGomora?
3 Chii chatingadzidza kubva kuSodhoma neGomora?
Nei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa?: Iyo nyaya
Sei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa naMwari
Pane imwe nguva muhupenyu hwavo, Abrahama nemuzukuru wake Roti vakaenda munzira dzakasiyana. Roti akagara muguta reSodhoma nekuti dunhu iri raive rakaorera kwazvo. Asi vanhu vemudunhu iri vaive vakaipa kwazvo.
“Abhurahama akagara munyika yeKenani, Roti akaenda kundogara pakati pemaguta omupata, uye akasimbisa musasa wake pedyo neguta reSodhoma. Vagari veSodhoma vaive vakaipa uye vakaita zvivi zvakakura kwazvo pamberi paIshe.
Genesi 13: 12-13
Kukundwa kweSodhoma neGomora
Mushure menguva, vagari veSodhoma neGomora vakakundwa muhondo. Roti nevamwe vese vagari vakatapwa. Paakaziva zvainge zvaitika, Abrahama akaunganidza boka ndokununura Rotipamwe chete nevamwe vagari veSodhomu. Iyo Mambo weSodhoma akapa Abraham hupfumi mukutenda, asi wakaramba mubairo wese, kubvira Abraham haana kuda kuzvisvibisa nehupfumi hweSodoma.
Mambo weSodhoma akati kuna Abhuramu:
"Ndipe vanhu vacho ndichengete zvinhu."
Asi Abhuramu akapindura akati:
"Ndakapika naJehovha, Mwari Wekumusoro-soro, Musiki wedenga nenyika, kuti handingatore chinhu chipi zvacho chiri chako, kunyangwe tambo kana tambo yeshangu." Saka haugone kutaura kuti, "Ndakafumisa Abhurama."
Genesisi 14: 21-23
Pane imwe nguva, Ngirozi yaJehovha yakashanyira Abrahamu ndokumuudza kuti aizoongorora mhosva dzeSodhoma neGomora uye Ndairova vanhu. Abrahama ipapo akakumbira kunzwirwa tsitsi kuvanhu vakarurama aigara mudunhu. Naizvozvo, Mwari akataura izvozvo kana akawana oga 10 vanhu vakarurama, aisazoparadza Sodhoma neGomora.
Ipapo akaswedera kuna Jehovha ndokuti:
"Uchanyatsoparadza vakarurama pamwe nevakaipa here?" Zvimwe mune makumi mashanu vakarurama muguta. Uchavaparadza vese, uye haungaregerere nzvimbo iyoyo nekuda kwerudo rwevakarurama makumi mashanu varimo? Ngazvive kure nemwi kuita chinhu chakadai! Urayai wakarurama pamwe chete newakaipa, uye makaita zvose zvakafanana here? Usamboita zvakadai! Iwe, ndiwe Mutongi wepasi rese, haungaiti kururamisira here?
Genesisi 18: 23-25
Kurangwa kweSodhoma neGomora
Zvisinei, havana kuwana varume gumi vakarurama. Asi, nekuda kwerudo rwaAbrahama, Mwari akatuma vatumwa vaviri kuti vabudise Roti nemhuri yake muSodhomu kuparadzwa kusati kwaitika, nekuti ndiye ega munhu akarurama panzvimbo iyoyo. Roti akakoka ngirozi (aitaridzika sevarume) kunorara kumba kwake.
Kana husiku hwasvika, zvese Varume veSodoma vakakomba imba yaRoti uye vakakumbira kuti auye navaenzi vake vaviri kuitira kuti vakabatwa chibharo. Vakanga vasati vaenda kunorara apo varume veguta reSodhoma vakakomba imba. Vanhu vese pasina anosara, vese vakuru nevadiki, vaivapo. Vakadaidza Roti ndokuti:
"Varipi varume vauya kuzorara kumba kwako?" Vadzinge kunze! Tinoda kurara navo!
Genesisi 19: 4-5
Roti akaedza kuvamisa, asi varume vacho vakaita chisimba. Ipapo ngirozi dzakakuvadza varume noupofu uye vakadzinga Roti nemhuri yake muguta. Vakatiza Mwari ndokuparadza Sodhoma neGomora.
Kwakanaya moto nesarufa paSodhoma neGomora, kuparadza zvese. Mangwanani akatevera, Abhurahama akatarisa tarisa mutende rake ndokuona utsi chete hukobvu huchibva pasi.
Roti akasvika paZoari utonga hwotsvuka. Ipapo Jehovha akaunza mvura nesarufa kubva kudenga pamusoro peSodhomu neGomora. Nekudaro akaparadza maguta iwawo nevagari vawo vese, pamwe nemapani ese neuswa pasi.
Genesisi 19: 23-25
Iye zvino zvaunoziva
Ndezvipi zvivi zveSodhoma neGomora?
Vanhu veSodhoma neGomora vakaita zvivi zvakawanda zvakaita kuti vaparadzwe. Havana kungofira zvivi. Vakafa nekuti vakasiya zvachose runako uye Kururamisira, achizvitsaurira zvakakwana kuchivi.
Zvimwe zvezvivi zveSodhoma neGomora zvinotaurwa muBhaibheri ndezvi:
Saizvozvowo Sodhoma neGomora nemaguta akavakidzana anoiswa sechidzidzo, vachitambura nekurangwa nemoto usingaperi, nekuti vakaita, sevaya vakaita hupombwe nekusazvibata. Judha 1:7
Kusanyara: havana kunzwa kudiwa kwekuvanza zvivi zvavo.
Kufunga kwavo kunovapomera, uye seSodhoma, vanozvirumbidza pamusoro pezvivi zvavo, uye havazvivanzi; Vane nhamo, nekuti vanozvikonzera njodzi yavo. Isaya 3: 9
Kuzvikudza uye kuzvidza vanoshayiwa.
Hanzvadzi yako Sodhoma nemisha yake vakatadza kubva mukuzvikudza, makaro, kusava nehanya, uye kusava nehanya nevarombo uye varombo. Vaizvitenda ivo pachavo kupfuura vamwe, uye pamberi pangu vakaita tsika dzinosemesa. Ndokusaka, sekuzviona kwawakaita, ndakavaparadza. Ezekieri 16: 49-50
Chii chatingadzidza kubva kuSodhoma neGomora?
Kuparadzwa kweSodhoma neGomora kwakashandawo semuenzaniso. Sekuparadzwa kwakaitwa Sodoma neGomora, rimwe zuva Mwari acharanga vanhu vese. Mwari achaita kururamisira.
Pamusoro pezvo, akatuka maguta eSodhoma neGomora, akaaputsa ndokuita madota, achiaita sechidzidzo kune vakaipa. 2 Petro 2: 6
Vakaipa vachawana mubayiro wakakodzera, Asi Mwari vanewo simba rekudzivirira vakarurama. Mwari akaregerera Roti uye anoregererawo avo vanomuda, vachiramba zvivi zvakavakomba.
Kune rimwe divi, akasunungura Roti akarurama, uyo akafadzwa nehupenyu husina kudzorwa hwevakaipa ava, nekuti uyu akarurama, aigara navo uye aida zvakanaka, zuva nezuva ainzwa mweya wake uchidamburwa nemabasa akaipa. akaona uye akanzwa. Zvese izvi zvinoratidza kuti Ishe vanoziva kununura avo vanorarama sezvinoda Mwari kubva mukuyedzwa, uye vanochengeta vakaipa kuti vavarange pazuva rekutongwa.
Tinovimba unonzwisisa izvozvi nei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa Oh Mwari wangu. Gara uchirangarira kuti zvivi zvinokutora kubva KWAAI.